लकडाउनकाे सम्भावना कति ? - EKalopati
लकडाउनकाे सम्भावना कति ?
कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकार कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफलमा जुटेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबारसम्म कोरोनाभाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या १६ हजार नाघेको छ । पछिल्लो दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक ४ दिनमा दोब्बर बनेको तथा अस्पतालहरुमा आईसीसी तथा भेन्टिलेटर अभाव हुन थालेको सरकारी निकायले बताउन थालेका छन् ।
यसबाहेक सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमता बढी यात्रु बोक्न नपाइने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा जोड दिइनुका साथै मास्क अनिवार्यरुपमा प्रयोग गर्न पनि भनेको छ ।
तर स्वास्थ्य मापदण्ड उलंघन स्वयम् सरकारी निकायले समेत गरिरहेको देखिन्छ ।
यसैबीच कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गराउन सम्बद्ध निकाय गम्भीर नबनेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले यसबारे आवश्यक निर्देशन नै दिएका हुन् । पछिल्ला दिनमा कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दै गएको र दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि शनिबार कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) अधिकारीसँग छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
कडा कदम नचाले धरै छैन
Previous articleहेटाैंडामा सुरू भयाे जाेरबिजाेर
Next articleएकै दिनमा ३ लाख ५० हजार संक्रमित थपिन्छन् भारतमा